Tirakoobka Isticmaalka Warbaahinta Bulshada ee Suuqgeeyayaasha Dijital ah 2022 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Tirakoobka Isticmaalka Warbaahinta Bulshada ee Suuqgeeyayaasha Dijital ah 2022
Tirakoobka Isticmaalka Warbaahinta Bulshada ee Suuqgeeyayaasha Dijital ah 2022
Hal qayb oo ka mid ah istiraatiijiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah ee guuleysta waa joogitaankaaga warbaahinta bulshada.
Haddii aad u baahan tahay lambarro si aad u caddeyso qiimaha suuq-geynta warbaahinta bulshada, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Hadda waxaa jira 4.55 bilyan oo isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada firfircoon adduunka oo dhan, laakiin tiradaas ayaa 9.9% ka sarreysa sannadkii hore.
Taasi waxay la macno tahay 400 milyan oo qof oo cusub ayaa iska diiwaan galiyay ugu yaraan hal akoon oo baraha bulshada sanadkii la soo dhaafay.
Adduunka oo dhan, shabakadaha bulshada ee ugu sarreeya waa Facebook, YouTube, WhatsApp, iyo Instagram.
Sii wad akhriska si aad u ogaato sababo badan oo ganacsigaagu ugu baahan yahay suuqgeyn warbaahinta bulshada.
Immisa Qof ayaa Isticmaala Baraha Bulshada Bishiiba?
Laga bilaabo 2021, 84% dadweynaha Mareykanka ayaa isticmaala ugu yaraan hal shabakad bulsho.
Adduunka oo dhan, tirada firfircoon ee isticmaala baraha bulshada waa 57.6% wadarta dadweynaha. Taas macneheedu waa dhamaaday dunida kala bar si joogto ah u isticmaala ugu yaraan hal shabakad bulsho bishii hal mar.
Toddobada shabakadood ee ugu sarreeya waxay leeyihiin in ka badan 1 bilyan isticmaaleyaal firfircoon bishii.
Facebook ayaa hogaaminaya liiska shabakadaha bulshada ee inta badan la isticmaalo, waxaa ku xiga YouTube, ka dibna inta kale ee metaverse - WhatsApp, Instagram, iyo Facebook Messenger.
Aynu si qoto dheer u eegno tirooyinka.
Celceliska Qadarka Isticmaalayaasha Bishii ee 2021
Kuwa soo socda ayaa ah tirakoobyada isticmaalayaasha billaha ah 15ka barnaamij ee warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya adduunka oo dhan 2021:
Facebook - 2.89 bilyan
YouTube - 2.29 bilyan
WhatsApp - 2.00 bilyan
Instagram - 1.39 bilyan
Facebook Messenger - 1.30 bilyan
WeChat (Weixin) - 1.25 bilyan
TikTok (Douyin) - 1 bilyan
LinkedIn - 800 milyan*
QQ - 591 milyan
Sina Weibo - 566 milyan
Telegram - 550 milyan
Snapchat - 538 milyan
Kuaishou - 506 milyan
Twitter - 463 milyan
Pinterest - 454 milyan
* Wadarta xubnaha - tirada isticmaalayaasha firfircoon ee bishiiba ee liiska
Gudaha Maraykanka, meelaha ugu sarreeya ee warbaahinta bulshada ee ay isticmaalaan boqolleyda dadka waaweyn waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Albaabka xiga - 13%
Fiiri liiskan hoggaamiyeyaasha warshadaha warbaahinta bulshada 2021 iyo qaar ka mid ah tirakoobyada waxqabadkooda ugu wanaagsan.
Facebook ayaa liiskan ugu sarreeya sabab. Kaliya maaha inay tartanka ka saareen beerta 2.89+ bilyan isticmaale bil kasta, laakiin 69% dadka qaangaarka ah ee Mareykanka waxay isticmaaleen Facebook ugu yaraan hal mar sanadkii la soo dhaafay.
Tirakoobka Facebook ee 2021 wuxuu sheegayaa sheeko halkaas oo cutubyo badani diiradda saaraan jiilalka yaryar.
In ka badan 53% isticmaaleyaasha Facebook ee adduunka oo dhan waxay ku jiraan kooxda da'doodu u dhaxayso 18-34, iyadoo 25-34 jir ay hoggaaminayaan 31.5% iyo 18-24 sano jir 22.7%.
Meheradaha ayaa sidoo kale si weyn uga faa'iideysta Facebook. In ka badan 200 milyan oo ganacsi ayaa isticmaala Facebook si ay u gaaraan macaamiishooda.
La yaab maaha markaad aragto in celceliska isticmaale Facebook uu riixo ku dhawaad ​​12 xayaysiis bishii.
Haddii aad raadinayso hawlgelin dheeraad ah sumaddaada, hubaal isku day Facebook.
Google ayaa laga yaabaa inuu yahay hormuudka raadinta raadinta, laakiin YouTube waa mashiinka raadinta iyo mareegaha labaad ee ugu caansan adduunka oo dhan.
Dadku ma joojin karaan daawashada YouTube Dalka Maraykanka, 62% isticmaalayaasha YouTube ayaa maalin walba booqda YouTube. Bil kasta, in ka badan 2 bilyan isticmaalayaasha soo gala waxay daawadaan 1 bilyan oo saacadood oo muuqaal ah maalin kasta.
Daqiiqad kasta, abuurayaasha YouTube waxay soo geliyaan wax ka badan 500 saacadood oo xog ah. Taasi kaliya maahan wax badan oo ka kooban laakiin wax badan oo xayeysiis ah iyo xayeysiis ganacsi.
Waxa xayaysiiyayaasha ay ku farxi doonaan inay maqlaan waa in xayaysiisyada YouTube ay shaqeeyaan, iyagoo gaaraya 2.29 bilyan isticmaalayaasha YouTube.
Instagram hadda waxa ay isku xidhaa in ka badan 1 bilyan isticmaale kuwaas oo raba in ay wadaagaan oo ay abuuraan.
Dadku sidoo kale waxay jecel yihiin la macaamilka ganacsiyada Instagram-ka. In ka badan 200 milyan oo meherado ayaa maalin walba soo booqda isticmaaleyaasha Instagram. Waxaad arki kartaa sababta shirkado badani ay hadda ugu soo jeesteen Instagram si ay kor ugu qaadaan sumaddooda.
Sida laga soo xigtay Instagram, 90% isticmaaleyaasheeda waxay raacaan calaamad halka 87% ay qaadaan tillaabo markay arkaan badeecad.
Waxa sidoo kale xiisaha leh waa tirakoobka Instagram ee ku saabsan sida dadku u dhaqmaan marka ay wax iibsanayaan. Tusaale ahaan, 70% dukaamaystayaashu waxay u eegaan Instagram iibkooda soo socda, iyo in ka badan 130 milyan isticmaalayaasha Instagram waxay taabtaan qoraalada wax iibsiga bishii kasta.
Intaa waxaa dheer, 86% isticmaaleyaasha Instagram waxay u badan tahay inay eegaan badeecad sababtoo ah waxay ahayd mid mudan in la wadaago, iyo 50% dukaameeysatada waxay booqdeen degel ka dib markay ku arkeen badeecad Sheekooyinka Instagram.
LinkedIn waa adduunka oo dhan. Shabakadda xirfadda leh waxay leedahay in ka badan 800 milyan isticmaalayaasha oo ka kala yimid in ka badan 200 oo waddan. Waxaa lagu yaqaanaa in ay tahay hab wanaagsan oo aad naftaada ugu suuq gayn karto si xirfad leh oo aad u sameyso xiriir ganacsi, goobtu waxay leedahay meel fog.
Sahan ku saabsan kalsoonida dhijitaalka ah, macaamiisha Maraykanku waxay ku qiimeeyeen LinkedIn inay tahay goobta ugu badan ee ilaalinaysa gaarnimadooda iyo xogtooda.
Sida laga soo xigtay Statista, 59.2% isticmaalayaasha LinkedIn waxay ku dhacaan kooxda da'doodu u dhaxayso 25-34, iyadoo 56.6% isticmaalayaashu ay yihiin rag.
LinkedIn sidoo kale waxay u fiican tahay ganacsiyada B2B. Marka loo eego sahan ay samaysay LinkedIn, waxay ahaayeen lambarka 1 ee jiilka hogaanka.
Pinterest kaliya maaha inaad qorshayso arooskaaga ama aad badbaadiso 10 milyan oo cunto ah oo aadan weligaa karin. Waxay ku saabsan tahay wax kasta oo aad ka fikiri karto, taas oo qayb ka ah sababta ay dadku u isticmaalaan goobta.
In ka badan 459 milyan oo qof ayaa u isticmaala Pinterest si ay u dhiirigeliyaan, iyo 80% isticmaaleyaasha Pinterest toddobaadlaha ah waxay heleen astaan ​​ama badeecad cusub iyagoo eegaya quudinta shabakadda.
iyo Pinterest leeyahay si fiican ayuu u shaqaynayay. Si la yaab leh, dakhliga shirkadda ee 2021 Q3 ayaa kordhay 43% sanadba sanadka ka dambeeya.
Isticmaalayaasha Pinterest guud ahaan waxay leeyihiin ujeedo, si kastaba ha ahaatee. Marka la barbardhigo qof kasta oo kale, Pinterest ayaa ka saara tartanka marka ay timaado ujeedada. Taasi waa sababta oo ah 55% isticmaaleyaasheeda waxay galaan app-ka si ay u raadiyaan alaabada.
Iyadoo 1 bilyan isticmaaleyaal firfircoon bishii, halka 60% ka mid ah ay yihiin 18-34 sano jir, ma dafiri kartid TikTok inay boos ku leedahay isku dhafka suuqgeynta ganacsiyo badan.
Qaybaha ugu sarreeya, ee ku salaysan aragtida hashtag, waxaa ka mid ah madadaalo, qoob ka ciyaar, jimicsi/ciyaaraha, dib u cusboonaysiinta guriga/DIY, quruxda, iyo moodada. Noocyada abuuri kara waxyaabo ku habboon mid ka mid ah qaybahan waxay u badan tahay inay kordhiyaan muuqaalkooda daawadayaasha TikTok.
Sidee muhiim ugu tahay TikTok ganacsiga ecommerce? Marka loo eego sahanka Adweek & Morning Consult, 15% dadka waaweyn iyo 36% isticmaalayaasha Gen Z TikTok waxay iibsadeen wax ku saleysan waxyaabaha lagu arkay TikTok.
Ku billow waxa ku jira TikTok talo-bixin xogeed ay kaxayso madalkooda.
Fiidiyowyada qaada shaashadda buuxda (9:16 saamiga) waxay arkayaan kor u kaca 60% ee dareenka.
Fiidiyowyo leh qoraallo xidhan ama qoraal shaashadda ku yaal waxay arkayaan 55.7% kor u qaadis muuqaal ah.
Fiidiyowyo wata macluumaadka kaadhka koobitaanka/dhamaadka waxay arkayaan 47.3% kor u qaadis muuqaal ah.
Dadka da'doodu u dhaxayso 538-13 sano jir ee Snapchat ka dhiga in ka badan 24% saldhigga isticmaale ee Snapchat.
Sida laga soo xigtay Snapchat, 306 milyan oo qof ayaa isticmaala madal maalin kasta, iyagoo celcelis ahaan 30 daqiiqo ku qaata shabakada. In ka badan 210 milyan oo sawirro ah ayaa la abuuray maalin kasta illaa 2019.
Xayeysiiska Snapchat ayaa sii kordhaya. Sannadkii 2021 Q3, dakhliga Snapchat ayaa kor u dhaafay 1 bilyan oo doolarka Maraykanka ah.
Markaan u gudubno 2022, waxaan arki doonaa soo ifbaxa isbeddello cusub, astaamo, iyo waxyaabo kaloo badan oo ka yimid warbaahinta bulshada.
Waxaa lagu qeexaa karti lagu beddelo waqtiyada, isku xidhka dadka, iyo ka qaybgalka, titannada warbaahinta bulshada waxay u badan tahay inay sii wadi doonaan inay suuqa kaxeeyaan.
Tirakoobku been ma sheego: Baraha bulshada waa halkan, waana halkan in la joogo.
10 Sababood oo Warbaahinta Bulshadu ay Muhiim ugu tahay Shirkaddaada
6 Qaababka kale ee Warbaahinta Bulshada ee la tixgeliyo
Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada: Hagaha Istaraatiijiyad Dhamaystiran
Sawirka muuqaalka leh: Anna Frajtova/Shutterstock
Sida loo dhiso istiraatiijiyad suuq-geyneed oo mustaqbalka-dheer ah
Amazon, Walmart iyo Dagaalka Epic ee Kharashaadka Macaamiisha